Lithops Factory, Suppliers - China Lithops Manufacturers
Conophytum Vanzylii inonzi perennial succulent, kana kuderedzwa kusvika kuyero, kazhinji isina stipules.Dzinde ipfupi uye kazhinji isingaoneki.Metamorphosis leaf nyama is hypertrophic, two pieces of opposite union become inverted cone.Variety yakawanda, imwe neimwe ine hunhu.
Conophytum Vanzylii maruva bisexual, akatsvinda, ari ega, kana axillary dichotomous cymes kana terminal imwe bazi cymes, perianth 1 yakaputika, kubva pa4 kusvika ku5 yakaparadzaniswa kana yakasanganiswa yeganda, yakasvibira sepals.
Stamens chaizvo 5, asi kazhinji yakakamurwa kuita mazhinji, ekunze anowanzo sever uye petal-senge, filaments akapatsanurwa kana synthesized kuita mabundle, kana base kuita monomers; Pistil zvakanyanya ne3 ~ 5 carpels akabatana, ovary yepamusoro kana yakaderera, 1 ~ 5 makamuri ( apo neapo kusvika 20).Mazai akawanda, haawanzoitiki, akapidiguka kana akakombama mukamuri yega yega.Capsule kana berrylike.
Conophytum Vanzylii muromo wakakora muviri, muromo mutsvuku, 3 ~ 4 makore ematombo emaruva matsutso kubva pakakoromo pakati peanosiya anosiya yero, machena, pink uye mamwe mavara emaruva, ruva rimwechete rinogona kuvhura 3 ~ 7 mazuva. vanotumbuka, maruva anenge akavhara chirimwa chose uye akanyanya kusimba.Uye mushure memakore emamwe marudzi achaparadzaniswa kuva mapoka.
Atrribute: Mini succulent Mashizha ane nyama
Chimiro cheChirimwa: Inverted cone Pebble shape
Succulent Plant Lithop "Gorofu"
Lithop Plant musanganiswa ruvara L. lesliei
Aucampiae L. Bol.is imhando yetsika yakasimba mu genus lithophilia, uye dormancy haisi pachena muchirimo.Zuva vhiri jade rinofarira kudziya kwechando uye inotonhorera yezhizha mamiriro ekunze, inodziya yakaoma uye yezuva nharaunda.Itya kushoma tembiricha, dzivirira yakasimba. chiedza.Sezuva rakazara, tembiricha yakakodzera yekukura kwe10 ~ 30 ℃.Inokodzera kukura mune yakasununguka yakasununguka sandy loam.Mhuka mbiri dzechando uye zhizha rangarirai kuderedza zvakakodzera kune unyoro hunoita molting.
aucampiae L. Bol.sezuva, tembiricha yekukura i20 ℃ a 24 ℃, mwaka wechirimo nematsutso unofanirwa kuiswa pavharanda rekumaodzanyemba kana kurimwa kwemahwindo, panguva ino ndiyo nguva yekukura kwayo, inofanira kudururwa mazuva 3-5 1 nguva mvura, kusimudzira. kukura nekutumbuka.Mutemo wekukura kweruva redombo ndewekuti rinotanga kukura pakati paKurume naKubvumbi, rinomisa kukura kwaro mumwaka wekupisa kwepamusoro, rinopinda panguva yekurara muchirimo, rinoramba richikura uye richitumbuka mushure mekutonhora kwematsutso, uye kupinda. nguva yekusviba kana ruva rasvava.
Koroka uye gadzirisa nzvimbo ino yekugovera chikamu
Chimiro cheChirimwa: Chimiro chehurungudo
Pleiospilos Royal Flush muchirimo dormancy, kumwe kukura kwemwaka, Pleiospilos Royal Flush peeling nguva ichave yakareba, inogona kupararira mukati mekukura kwemwaka, kusvuura nguva inoda kusangana nekupenya kwezuva, kushoma kwemvura, asi zvakare chenjera kuti usatsva nezuva, tsvuku emperor jade. desquamate iri kunze kweganda rekare rakaoma zvishoma nezvishoma, zvokudya zvinopiwa kune chirimwa chitsva, shizha remuti mutsva uye blade yekare inogona kukura panguva imwe chete.
Pleiospilos Royal Flush yekudyara zvinhu zvinopinda mukati uye zvinofema, Pleiospilos Royal Flush haimirire zuva, chirimo chinofanira kunge chiri sunshade, Pleiospilos Royal Flush peeling nguva inogona kutsvaga mvura yakakodzera, iyi yakasiyana-siyana inowanzova mvura yakaoma, kudiridza haisi dipping basin. zhizha shading, rakaiswa muchiedza chakajeka uye chinofefetera chakapararira, chirimo chichava tsvakiridzo kana kuti yose yakagurwa mvura, yakawanda ichava yakaora, Pleiospilos Royal Flush muzhizha kana kuti isiri nyore kutarisira, mvura shoma yakaora.Zhizha rose risina mvura, risina hanya. uyewo nyore kuoma.Kana kutonhora kunouya pasi muvhuvhu, mvura inogona kudzorerwa, nhanho nhanho.Kana chirimwa chakazara, hachidi kuti chizadzwezve.Kana ikawanikwa iine zvishoma, inogona kudzorerwa pakarepo.Munguva yechando, kutonhora kwakanyanya kuderera uye frostbite inofanira kudziviswa.Hapana dambudziko kana ivhu rakaoma pa zero madhigirii Celsius. Musiyano pakati kuchamhembe uye kumaodzanyemba yakakura, ruva shamwari kurima maererano nharaunda yavo pachavo, mutsvuku mambo jade kubereka kunogona kudyarwa, ruva shamwari vanofanira kuteerera. dzvuku emperor jade ganda rakatetepa mvura, rinonyanya kupikisa zuva oh, maruva shamwari haateereri kupiswa kwezuva.
Succulent chirimwa Lithops Olivacea
Iyo isina dzinde, isingaperi inonaka ine peya yemashizha akakora anoita sematombo kana isiri muruva inosvika 25mm kureba uye 18mm yakafara painotsemuka.Rudzi urwu runoumba masumbu makuru kwazvo, kazhinji aine misoro makumi matatu kana kupfuura.Iwindo rakasvibira-muorivhi-girini kana greyish green;mativi ane grey dzimwe nguva akasvibira-yero, dzimwe nguva kupenya zvakajeka.Iwindo rine chimiro diki pane rakakura denderedzwa remisoro.
Mumiti yakaunganidzwa, hwindo rinowanzoita rakapetwa uye rakasvibira brownish-girini, asi mukurima mahwindo anogara akasvibira uye convex.Mune zvimwe zvirimwa zvitsuwa hazvipo (var. maculata) asi mune zvimwe zvinogona kusvika gumi nezvitanhatu zvitsuwa.Mupendero wehwindo unongova denticulate zvishoma mune zvimwe zvirimwa, nepo mune mamwe muganho unonyatso dhizaini.Maruva ane yellow, kusvika 30mm muhupamhi, 5-merous.